Archos Play Tab waxaa lagu shaaciyey shaashad 21-inji ah | Androidsis
Haddii aad rabto ku raaxayso ciyaaraha aad jeceshahay shaashad weyn, waxaad ka sameyn kartaa Archos-ka cusub ee gaaraya 21 inji. Waxaa jira kiniinno cabbirkoodu aad u weyn yahay, sida kuwa Samsung oo kale ah Muuqaalka Galaxy iyo 18,4 inji
Archos ayaa ku dhawaaqday mid cusub kiniin Play Tab oo aad rabto inaad ku kasbato qalbi kuwa ciyaaraya kuwa doonaya inay ku ciyaaraan kulamadooda ay jecel yihiin shaashad ka weyn. Kaliya maahan ciyaartooyda, laakiin sidoo kale qoys ahaan waad ciyaari kartaa ciyaaraha guddiga oo bixiya khibrad weyn.
Archos Play Tab waxaa lagu gartaa iyada 21,5 inji shaashad HD buuxa ah, processor octa core processor ah oo aanan garanayn magaciisa, 32 GB oo keyd gudaha ah, 3GB oo RAM ah, 5.000 mAh baytari iyo Android Pie.
Weli waa la arki doonaa haddii baytarigaasi uu ku filan yahay shaashadda 21,5-inji ah oo lagu sameyn karo ballaarin ballaaran oo dusha miiska qolka fadhiga ah. Sikastaba, Archos wuxuu kugula talinayaa in batteriga jiidayo ku filan inuu ciyaaro dhaadheer iyada oo aan laga fekerin ku xirnaanta korantada.
Way cadahay inay tahay kiniin loogu talagalay inta badan ciyaaraha guddiga.s loo yaqaan inay yihiin Monopoly, Faafida, Ceeb, Mid iyo in yar oo kale oo aan waqti fiican la qaadan karno qoyskeena. Kiniin ku mahadsan Google Play Store ayaa si fiican loogu adeegaa cayaaraha si galabnimadaas loogu raaxeysan karo asxaabta ama qoyska.
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah waa qiimaha, Archos Play Tab ayaa laga daawan doonaa Yurub goor dambe sanadkan 249 euro, marka ma ahan aalad macnaheedu yahay xawaare sare sidoo kale. Wanaagsan tahay Kirismaska ​​waana tan ay ujeedkeedu yahay inay noqoto qalab ku habboon qolka fadhiga ee gurigeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Archos wuxuu ku dhawaaqayaa 21 ″ kiniin weyn oo loogu talagalay ciyaaraha guddiga
Waxaan leeyahay Archos waana wax aan faa'iido lahayn.
Xitaa ha ka fikirin inaad iibsato.
WhatsApp ayaa ku tusi doonta haddii fariin marar badan loo gudbiyay
Netflix waxay tijaabisaa Hindiya qiime cusub oo ah kala bar qiimaha